डेढ महिनामा सुदूरपश्चिममा १५ हजार बढीको परीक्षण - सुदूरपश्चिम - कान्तिपुर समाचार
डेढ महिनामा सुदूरपश्चिममा १५ हजार बढीको परीक्षण
वैशाख १७, २०७७ चित्रांग थापा
धनगढी — कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि डेढ महिना अवधिमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका ९ जिल्लाका १५ हजार ७६३ व्यक्तिको परीक्षण गरिएको छ । पीसीआर प्रविधिबाट २ हजार ७७७ र आरडिटी विधिबाट १२ हजार ९८६ जनाको नमुना संकलन गरि परीक्षण गरिएको हो ।
सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालयले मंगलबार सार्वजनिक गरेको कोरोना संक्रमणको अवस्था तथा परीक्षण, उपचार र स्वास्थ्य सामग्रीको अवस्थाबारेको विवरणमा उल्लेख भएअनुसार हालसम्म प्रदेशमा ५ जना कोरोना पोजेटिभ बिरामी फेला परेका थिए । जसमध्ये अघिल्लो सातासम्म ४ जना निको भइ घर फर्किसकेका छन भने १ जनाको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।
१५ हजार ७६३ जनाको नमुना संकलन गरिएकोमा २ जनाको मात्र परीक्षण नतिजा आउन बाँकी रहेको छ । पीसीआर विधिबाट गरिएको नमुना संकलनको नतिजा आउन बाँकी रहेको हो । प्रदेशभरी मंगलबारसम्म आइसोलेसनमा रहेका शंकास्पद बिरामीहरुको संख्या ५ रहेको छ । धनगढीमा २, कैलालीको चौमाला स्वास्थ्य केन्द्रमा १ तथा अछाम र डडेलधुरा जिल्ला अस्पतालमा १/१ जना गरि ५ जना आइसोलेसनमा रहेको स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ ।
‘आइसोलेसनमा रहेकाहरुको अवस्था सामान्य रहेको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरुबाट जानकारी प्राप्त भइरहेको छ,’ सुदुरपश्चिम प्रदेशका स्वास्थ्य निर्देशक डा. गुणराज अवस्थी भन्छन्, ‘अब जिल्ला अस्पतालमा कुनै बिरामी कोरोना पोजेटिभ देखिएमा पनि सम्वन्धित जिल्लामै उपचार गराउनसक्ने स्वास्थ्य सामग्री र दक्ष जनशक्ति उपलब्ध हुने अवस्था रहेको छ ।’ उनले परीक्षणका लागि किटहरुको अभाव देखा पर्न थालेको जानकारी दिए ।
प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार सबैभन्दा बढी ५ हजार ३३२ जनाको कैलालीमा आरडिटि परीक्षण गरिएको छ भने सबैभन्दा कम २ सय २० जनाको डडेलधुरामा गरिएको थियो । कञ्चनपुरमा १ हजार ८१६ जनाको आरडिटि परीक्षण भएको छ ।
प्रकाशित : वैशाख १७, २०७७ ११:५६
दुई सातापछि सेती अस्पतालमा रहेका संक्रमित युवाको पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ
वैशाख ६, २०७७ चित्रांग थापा
धनगढी — दुईसाता अघि कोरोना पोजिटिभ देखिएर धनगढीको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा आइसोलेसनमा रही उपचार गराइरहेका कैलालीको लम्की चुहा नगरपालिकाका एक युवाको पीसीआर परीक्षण नतिजा नेगेटिभ आएको छ ।
सेती प्रादेशिक अस्पतालका वरिष्ठ इमर्जेन्सी फिजिसियन डा. जगदीश जोशीका अनुसार धनगढीकै प्रयोगशालामा शुक्रबार गरिएको दोस्रो पीसीआर परीक्षणको नतिजा नेगेटिभ आएको हो ।
चैत २२ गते केन्द्रीय प्रयोगशालाबाट आएको जानकारीअनुसार उनको पहिलो परीक्षण नतिजा पोजेटिभ आएको उनले बताए । ‘पोजिटिभ देखिएर आइसोलेसनमा रहेकाहरुको २ पटक लगातार नेगेटिभ देखिएमा डिस्चार्ज गरिने कोरोना संक्रमण उपचारको प्रोटोकल रहेको छ,’ डा. जोशीले भने, ‘आज शनिबार पुन: परीक्षणका लागि उनको स्वाबको नमुना संकलन गरी धनगढीकै प्रयोगशालामा पठाइएको छ ।’ दोस्रो पटक पनि नेगेटिभ आएमा डिस्चार्ज गरिने डा. जोशीले बताए ।
सेती प्रादेशिक अस्पतालमा शुक्रबारको प्राप्त परीक्षणको नतिजामा नेगेटिभ देखिएका युवा तथा दुई महिलासहित पोजिटिभ देखिएका ५ जनालाई आइसोलेसन राखी उपचार भइरहेको छ ।
प्रकाशित : वैशाख ६, २०७७ १७:३२